Uncategorized - xyznews.co
‘ ဖိုင်နယ် အမှီ ပြန်ကောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ ‘ – ကိုဗာဆစ် ဒဏ်ရာ အကြောင်း စိုးရိမ်ဖွယ် ပြောပြရင်း ၊ ဒန်ဂျိမ်းစ်ရဲ့ အနီကတ် အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ တူချယ်
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှာ တန်းမဆင်းရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် အသင်းကို Elland Road မှာ တဖက်သတ် သက်တောင့်သက်သာ ကစားပြီး ၊ ၀ – ၃ ရလဒ်နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် ။ ဒီရလဒ်ကြောင့် ချဲလ်ဆီး ဟာ အောက်က လန်ဒန်မြို့ခံ …
ဗန်ဒိုက်က်ို အထူးချီးကျူးသွားခဲ့ကာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ခန့်မှန်းလိုက်တဲ ဝုဒ်ဂိတ်
May 10, 2022 - by Editor
ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် နဲ့ စပါး နောက်ခံလူဟောင်း ဖြစ်သူ ဂျိုနသန်ဝုဒ်ဂိတ်က ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ဟာ တအားကို ကောင်းလွန်းလှတဲ့ နောက်ခံလူလို့ ဆိုလိုက်ပြီး ဒီရာသီ လီဗာပူး စတားရဲ့ စွမ်းဆောင်ပေးထားမှု အပေါ် ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗန်ဒိုက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ ကာလအများစုကို ဒူးအရွတ်စုတ်ပြဲဒဏ်ရာကြောင့် လွဲချော်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း ဒီရာသီမှာတော့ ကလပ်အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံမှာ ၄၈ ပွဲ ကစားထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗန်ဒိုက်ဟာ …
ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲကနေ နှုတ်ဆက်လိုက်ရပြီးနောက် လူစာရင်း အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ မန်စီးတီး
ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်ရပြီးနောက် မန်စီးတီး တာဝန်ရှိသူတွေ ဟာ သူတို့ ကစားသမား စာရင်းကို အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဖို့ ဦးတည်လာနေသလို ၊ နည်းပြ ပက် ဂွာဒီယိုလာ ကိုလဲ စာချုပ်သစ် သက်တမ်း တိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးစား အားထုတ်လာနေပါတယ်။ မန်စီးတီး ဟာ မကြာခင်မှာပဲ ဒေါ့မွန် အသင်းက နော်ေ၀ တိုက်စစ်မှုး ဟာလန်း …
Title race အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပွဲစဉ်မှာ စ်ိတ်လှုပ်ရှားစရာ အပြည့်အ၀ ပေးခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး ၂-၂ လီဗာပူး ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက်များ
April 11, 2022 April 11, 2022 - by Editor
မန်စီးတီးဟာ မနေ့ညက အီတီဟတ်မှာ လီဗာပူးနဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ပြောင်မြောက်တဲ့ title race မှာ ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ထားနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးမှာ ထိပ်တန်းကစားသမားတွေ အများအပြား ရှိနေတဲ့ အပြင် ကွင်းတွင်း အရည်အသွေးကလည်း ပရိတ်သတ်တွေကို လုံး၀ စ်ိတ်မပျက်စေခဲ့ပါဘူး။ စီးတီးဟာ ပွဲအစပိုင်းမှာတော့ intensity ကောင်းကောင်းနဲ့ လီဗာပူးကို …
ဂန်းနားတို့ရဲ့Top4ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ကို အရှိန်မြင့်ပေးတဲ့ ဆာကာ ၊ အက်စတွန်ဗီလာ ၀-၁ အာဆင်နယ် ပွဲမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ
March 19, 2022 - by Editor
လီဗာပူး နဲ့ ကစားပြီး နှစ်ရက် အကြာမှာပဲ အက်စတွန်ဗီလာ အသင်း အိမ်ကွင်းမှာ သွားရောက် ကစားရတဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ အဝေးကွင်းမှာ အဖိုးတန် နိုင်ပွဲ ရယူပြီး အဆင့် ငါးက မန်ယူနိုက်တက် ကို လေးမှတ် အထိ ဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။ အက်စတွန်ဗီလာ နဲ့ ပွဲမှာ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ လူစာရင်းဟာ …
ရုရှ အပေါ်ချတဲ့ ဘောလုံးဆန်ရှင်များ ၊ ရိုနယ်ဒို နေရာအတွက် သန်း ၈၀ တန် တိုက်စစ်ပစ်မှတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယူကရိန်း နိုင်ငံ ကို ရုရှ နိုင်ငံက ကျူးကျော် ဝင်ရောက်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘောလုံး လောက ကလည်း ပြင်းထန်တဲ့ ဆန်ရှင်တွေ ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် တို့ဟာ ရုရှ လက်ရွေးစင် ( အမျိုးသား + …
ချဲလ်ဆီးကနေ အေစီမီလန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ စီးရီးအေ အကြားက ကွာခြားချက် တချက်ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဂျရူး
February 2, 2022 - by Editor
ပြင်သစ် ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျရူး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီမှာ ချဲလ်ဆီး အသင်းနဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၊ ကလပ်နဲ့ နောက်ထပ် တနှစ် သက်တမ်းတိုး စာချုပ် ချုပ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ အေစီမီလန် အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ၊ အသင်းပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် …
အီတီဟတ်က ရှုံးပွဲအပြီး လူကာကူရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေါ်တင် ဝေဖန်လိုက်တဲ့ တူချယ်
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှာ အမှတ်ပေးဇယားထိပ် က မန်စီးတီး အသင်း ကို အီတီဟတ်ကွင်းမှာ ကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်းရဲ့ တလုံးတည်းသော သွင်းဂိုးနဲ့ အတူ အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီး ၊ လက်ကျန် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ မျှော်လင့်ချက် အနည်းငယ်ကိုလည်း စွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပွဲမှာ …
နှစ်သစ်ကို ၃ မှတ်အလှူ နဲ့ စဖွင့်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ရှုံးပွဲက ပြောချင်စရာ အချက်များ
January 3, 2022 January 3, 2022 - by Editor
ဘန်လေ နဲ့ ပွဲမှာ ကစားပုံ ကောင်းကောင်း နဲ့ ၃ မှတ် ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ၃ ရက် အကြာမှာတော့ စိတ်ပျက်စရာ ကစားပုံနဲ့ အတူ ၂၀၂၂ ကို အကျည်းတန်စွာ ဖွင့်လှစ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အိမ်ကွင်း အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ …
ရွိုင်ကင်း ရဲ့ ဘဝမှာ ဂျာစီလဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ တယောက်တည်းသော ဘောလုံးသမား က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
ရွိုင်ကင်း ဆိုတဲ့ လူ ဘယ်လောက် ချေ တတ်သလဲ ဆိုတာ ဘောလုံးဂျိုးတွေ သိကြမှာပါ ။ ကစားသမား ဘ၀ မှာ ကတည်းက ခက်ထန်တဲ့ သွင်ပြင်ရှိတဲ့ အိုင်းရစ်သားကြီးဟာ ဘောလုံး မကစား တော့ပေမယ့် ရုပ်သံ ဖန်သားပြင်ထက်မှာ သူ့ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ဆက်လက် ပွဲဆူနေ တုန်းပါပဲ ။ …